ကြည်လင်းတို့ကို အမြင့်ဆုံးအဖြစ် သေဒဏ်ပေးနိုင်တဲ့ ပုဒ်မနဲ့ စွဲချက် တင် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ကြည်လင်းတို့ကို အမြင့်ဆုံးအဖြစ် သေဒဏ်ပေးနိုင်တဲ့ ပုဒ်မနဲ့ စွဲချက် တင်
epa05853550 Kyi Lin (R), suspect in the killing of Lawyer Ko Ni, is escorted by police as he arrives to the court in Yangon, Myanmar, 17 March 2017. Lawyer Ko Ni,alegal advisor from the National League for Democracy (NLD) party and airport taxi driver Nay Win,amember of NLD, were shot dead byagunman at the Yangon International Airport on 29 January 2017. EPA/NYEIN CHAN NAING
ကြည်လင်းတို့ကို အမြင့်ဆုံးအဖြစ် သေဒဏ်ပေးနိုင်တဲ့ ပုဒ်မနဲ့ စွဲချက် တင်
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်တဲ့ ကြည်လည်းနဲ့ အပေါင်းအပါတွေကို အမြင့်ဆုံးအပြစ်ဒဏ်အဖြစ် သေဒဏ်အထိ ပေးနိုင်တဲ့ ပုဒ်မ ၃၀၂ (၁) (ခ)/၃၄ နဲ့ စွဲချက် တင်လိုက်ပါတယ်။
(Photo – EPA\_NYEIN CHAN NAING)
ကြည်လင်း၊ အောင်ဝင်းဇော်နဲ့ ဇေယျာဖြိုးတို့ကို မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်နေ့က ရန်ကုန် မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာ ရုံးထုတ်ပြီး စွဲချက်တင်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်ဝင်းဇော်ကို ကားမောင်းပို့တဲ့ အောင်ဝင်းထွန်းကို အားပေးကူညီမှု ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၁၂ နဲ့ စွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။
ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့ အောင်ဝင်းခိုင်ကိုလည်း ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံး ဥပဒေပုဒ်မ ၈၈ အရ တရားခံပြေးအဖြစ် အမန့်ချပြီး တွေ့တဲ့နေရာမှာ ဖမ်းဆီးခွင့်ရှိကြောင်း အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ ‘ထမင်းဝအောင် စားထား’ စာသားပါ အင်္ကျီဝတ်ဆင်ပြီး တရားရုံး ပရဝုဏ်ကို လာရောက်သူ ၄ ဦးကိုလည်း ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပါတယ်။
ကွညျလငျးတို့ကို အမွငျ့ဆုံးအဖွဈ သဒေဏျပေးနိုငျတဲ့ ပုဒျမနဲ့ စှဲခကျြ တငျ
တရားလှတျတျောရှနေ့ေ ဦးကိုနီကို သနေတျနဲ့ ပဈသတျတဲ့ ကွညျလညျးနဲ့ အပေါငျးအပါတှကေို အမွငျ့ဆုံးအပွဈဒဏျအဖွဈ သဒေဏျအထိ ပေးနိုငျတဲ့ ပုဒျမ ၃၀၂ (၁) (ခ)/၃၄ နဲ့ စှဲခကျြ တငျလိုကျပါတယျ။
ကွညျလငျး၊ အောငျဝငျးဇျောနဲ့ ဇယြောဖွိုးတို့ကို မနကေ့ ဖဖေျောဝါရီ ၉ ရကျနကေ့ ရနျကုနျ မွောကျပိုငျးခရိုငျတရားရုံးမှာ ရုံးထုတျပွီး စှဲခကျြတငျလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။ အောငျဝငျးဇျောကို ကားမောငျးပို့တဲ့ အောငျဝငျးထှနျးကို အားပေးကူညီမှု ရာဇသတျကွီးဥပဒေ ပုဒျမ ၂၁၂ နဲ့ စှဲခကျြတငျလိုကျပါတယျ။
ထှကျပွေးလှတျမွောကျနတေဲ့ အောငျဝငျးခိုငျကိုလညျး ရာဇဝတျကငျြ့ထုံး ဥပဒပေုဒျမ ၈၈ အရ တရားခံပွေးအဖွဈ အမိနျ့ခပြွီး တှတေဲ့နရောမှာ ဖမျးဆီးခှငျ့ရှိကွောငျး အမိနျ့ခလြိုကျပါတယျ။ ‘ထမငျးဝအောငျ စားထား’ စာသားပါ အင်ျကြီဝတျဆငျပွီး တရားရုံး ပရဝုဏျကို လာရောကျသူ ၄ ဦးကိုလညျး ဖမျးဝရမျးထုတျထားပါတယျ။
Previous articleအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်တယ်လို့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ အိမ်ဖြူတော် မိန့်ခွန်းရေးပေးသူ နုတ်ထွက်
Next articleတပ်မတော်သည်ပင်လျှင် ပညာတတ်ဖို့ လိုနေတယ်လို့ စာရေးဆရာ ညီမင်းညို ပြော